के प्रतिज्ञा छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki surety
ग्यारेन्टी के हो?
जसले आज पनि ऋण चाहिन्छ, उदाहरणका लागि गृह निर्माणको लागि वा नयाँ कारको लागि पनि बैंकको लागि संपार्श्विक प्रदान गर्न सक्षम हुनु पर्छ। संपार्श्विक बैंकले मात्र माग गरेको छ ऋण रकम धेरै उच्च छ र त्यहाँ पर्याप्त क्रेडिटपढि बारेमा शंका छ। यी एक संपार्श्विक हो surety.
यो कसरी ग्यारेन्टी कार्य गर्दछ
एक गारंटीको अवस्थामा, एक तेस्रो पक्ष बैंक र उधारकर्ता, अर्थात् ग्यारेन्टी बीचमा संलग्न छ। यस ग्यारेन्टीले बैंकको अनुगमनमा क्रेडिटको ग्यारेन्टीमा लिखित लेखको घोषणा गर्दछ। यदि उधारकर्ताले अब भुक्तानीको हानि पर्थ्यो, त्यसपछि ग्यारेन्टीको ऋणको लागी उत्तरदायी छ। यद्यपि, यो स्वचालित रूपमा अर्थ छैन कि बैंकले लेनदेनको रूपमा बैंकलाई तुरुन्तै भुक्तान पूर्वनिर्धारितको घटनाको दाबी गर्न सक्छ। बरु, कर्जाको बोझ र यसरी उधारकर्ताबाट यसको माग पनि मुख्य ऋण रहेको छ। यो अभ्यासको लागि कि लेनदेनले सधैँ कानूनी कार्यवाही गरिसकेको छ, सहित उधारकर्ता विरुद्ध लागु लागी लागी लागी लागी लागी। यो केवल जब फौजदारीले बताउँछ कि उधारकर्ता अधिक अनिवार्य छ र यसरी देनदार क्षमता तिर्न को लागी, ग्यारेन्टी खेलमा आउँछ। अबबाट ग्यारेन्टीमा ऋणको लागि उत्तरदायी छ। दायित्वको रकम ग्यारेन्टी सम्झौताद्वारा निर्धारण गरिन्छ। सिद्धान्तमा, एक ग्यारेन्टी नागरिक कोडको अनुसार लेखनमा राखिएको हुनुपर्छ। यो आवश्यकता §766 BGB बाट प्राप्त गरिएको छ। यस आवश्यकतालाई पनि लेनदेन को सही विवरण को आवश्यकता हो, ऋण को नाम र गारार द्वारा ऋण को राशि। लिखित फारमको लागि आवश्यकताको अपवाद केवल एकमात्र छ भने ग्यारेन्टी एक नाममा पूर्ण बिक्रि भएको व्यक्ति हो। मूलतः तपाईंलाई ग्यारेन्टीमा ध्यान दिनुपर्छ, एक ग्यारेन्टीको विभिन्न रूपहरू छन्। क्लासिक आत्म-लगाईएको ग्यारेन्टीको अतिरिक्त, त्यहाँ BGB प्रतिज्ञा, पूर्वनिर्धारित ग्यारेन्टी, वचन वा, उदाहरणका लागि, भाडा ग्यारेन्टी, विभिन्न प्रकारको ग्यारेन्टीहरूको कारण, यो पनि स्पष्ट छ कि ग्यारेन्टी मात्र क्रेडिटको क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको छैन।
यो गजलले अस्वीकार गर्दा यो हुन्छ
यदि एक ग्यारेन्टीले भुक्तानको प्रयोग गर्न इन्कार गर्यो भने, पादकर्ताले ग्यारेन्टीको विरुद्ध प्रवर्तन पनि लागू गर्न सक्दछ। नियमको रूपमा, अस्वीकार सफल छैन, कानूनी सम्भावनाहरू, जस्तै दावीको संग्रहको लागि अपवाद, लागू हुँदैन। यो ग्यारेन्टीको जिम्मेवारी अर्थात् अर्थात् आत्म-जिम्मेवारीको दायित्व हो। यस कारणको लागि, तपाई सँधै सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्दछ कि तपाइँ ग्यारिटी बनाउन चाहानुहुन्छ वा छैन। यदि ग्यारेन्टी ग्यारेन्टीद्वारा फर्काइएको छ भने, ग्यारेन्टी समाप्त भएको छ, तर दावी संसारको बाहिर छैन। बरु, दावीहरूको भुक्तानीमा ऋण परिणामहरूको भुक्तानी। एक लेनदेन को रूप मा बैंक को भुगतान गरिन्छ र यसैले अब यस त्रिकोण को भाग नहीं। यो अझै पनि ग्यारेन्टी र उधारकर्ता हुन्छ। केवल ग्यारेन्जर अब अब ग्यारेन्टी छैन, तर लेनदेन। एक लेनदेनको रूपमा, उनीसँग अब उधारकर्ता विरुद्ध प्रतिपूर्तिको दाबी छ।
अन्तमा, यो सूचित हुनुपर्छ कि एक ग्यारेन्टी पनि अवैध र शून्य हुन सक्छ। यस्तो मामला हो, उदाहरणको लागि, यदि ग्यारेन्टी भुक्तान दायित्वको धारणा द्वारा पूर्णतः वित्तीय रूपमा अधिकृत हुन्छ। साथै, ग्यारेन्टी ग्यारेन्टी हुन सक्छ र ग्यारह वा लेनदेन शोषण को बीच नजिक भावनात्मक सम्बन्ध छ भने यस तरिकाले अवैध हुन सक्छ। यो मामला हुनेछ, उदाहरणका लागि, यदि एक लेनदेन एक पतिबाट ऋण को हस्तांतरण को मांग गर्नेछ।
दर्जा: 4.5/ 5।2चुनावबाट।
अघिल्लो लेखक्रेडिट चेक
अर्को लेखअनुस्मारक क्रेडिट